Unugyada Cannabis iyo Kansarka - Baadhitaan cusub oo laga sameeyay jaamacadda Australia • Drugs Inc.eu
Wada-Shaqeyn & Wadashaqeyn
Sharci dejinta iyo Sharciga
Unugyada Cannabis iyo Kansarka - Baadhitaan cusub oo laga sameeyay jaamacadda Australia
Baarayaasha cannabis ee dawooyinka ayaa muujinayay daroogada cannabis ee dhirta suurtagalka ah ee ka hortagga kansarka sanado badan. Sanadihii la soo dhaafay, dawladaha adduunka oo dhan waxay bilaabeen inay u oggolaadaan isticmaalka dawooyinka cannabis dawooyinka lagu daaweeyo xaalado tiro kooban. Si kastaba ha noqotee, wax soo saarka cannabis waa in loo qoraa kaliya haddii kemotherabi ku keento lallabo dagaalka kansarka.
Hadda Jaamacadda Newcastle ee Australia ayaa daabacday caddeyn iyada oo la helay natiijooyin cusub oo muujinaya awoodda dhirta ee ka hortagga kansarka. Tijaabooyinka lagu sameeyay jaamacadda iyo Machadka Cilmi baarista Caafimaadka ee Hunter waxay muujiyeen in nooc ka mid ah xashiishadda cannabis ay dili karto ama xakamayn karto unugyada kansarka. Intaa waxaa dheer, the CBDNooca xashiishadda cannabis saameyn dambe kuma yeelan doonto unugyada kale ee dabiiciga ah.
Mid hoose THCNooca dhirta xashiishadda ee loo yaqaan 'Eve', oo ay soo saartay kooxda cilmiga dabiiciga ah ee Australiya, ayaa waxaa tijaabiyay cilmi baadhe kansar. Dr. Matt Dun Jaamacadda New South Wales. Nooca xashiishadda cannabis ayaa hodan ku ah CBD waxaana ku jira wax ka yar 1% THC.
Xashiishadda cannabis door ma ka cayaartaa daaweynta kansarka? (ilaha)
Xogta hore ayaa muujisay in THC - oo ah kuwa ugu badan ee cannabinoid ka sameysan xashiishadda cannabinoid - ay ahayd isha ugu weyn ee guryaha suurtagalka ah ee ka hortagga kansarka. Si kastaba ha noqotee, tijaabooyinka shaybaarka ee la sameeyay iyada oo lala kaashanayo Kooxda dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee Australiya waxay ogaatay in heerka sare ee CBD laga yaabo inay si wax ku ool ah u disho unugyada kansarka.
Dr. Matt Dunn, wuxuu sharraxayaa sida cilmibaarayaashu u tijaabiyeen suurtagalka cannabis ee daaweynta kansarka saddexdii sano ee la soo dhaafay:
Markii hore waxaan isticmaalnay unugyada leukemia waxaan runtii la yaabnay sida xasaasiga ay u yihiin. Isla waqtigaas, xashiishadda ma aysan dilin unugyada dhuuxa lafta caadiga ah, ama unugyada caadiga ah ee caafimaad ee loo yaqaan 'unugyada dhiigga cad'.
Baadhitaannada bilowga ah ka dib, cilmi baadhayaashu waxay ogaadeen in daroogada la helay ay ka kooban tahay habka kansarka loo xusho. Noocyada xashiishadda ee ka maqnaa heerka sare ee fal-galka cannabinoid THC ayaa la muujiyey inay aad ugu sii fiicnaanayaan dilashada unugyada kansarka ee la xiriira leukemia iyo maskaxda stem glioma.
Daraasadaha kale ee lagu sameeyay adduunka oo dhan waxay ogaadeen in cannabis oo leh maadooyin THC sarreeya ay ka caawin karto astaamaha kansarka. Gaar ahaan, waxaa la aasaasay in xashiishaddu ay kor u qaadi karto tayada nolosha bukaannada la xanuunsan lallabbo ee ay keento kemotherabi.
Dr. Si kastaba ha noqotee, Dunn wuxuu sharraxayaa in xashiishadda leh caddad sare oo THC ah ay sidoo kale yeelan karto faa'iido darro ku timaadda bukaannada qaarkood:
Gaari ma wadi kartid, tusaale ahaan, oo rugaha caafimaadku waxay si sax ah uga caga jiidayaan inay wax u qoraan cunugga oo sababi kara waxyaalo la mid ah ama waxyeelooyin kale. Kala duwanaanta CBD waxay u muuqataa inay leedahay wax ku oolnimo weyn, sun yar tahay iyo waxyeelo yar, taasoo ka dhigeysa inay suurtogal tahay daaweyn dhameystiran oo isku dhafan oo lagu daro waxyaabaha kale ee ka hortagga kansarka. ”
Wejiga xiga ee baarista aaggan ayaa isku dayi doona inuu fahmo waxa ka dhigaya unugyada kansarka mid nugul, halka unugyada kale aysan u muuqan inay yihiin. Baarayaasha waxaay qiimeyn doonaan in tani ay tahay mid caafimaad ahaan laxiriirta iyo in taasi ku dhacdo kansarrada kale.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), HMRI (EN)EN), Newcastle.edu (EN)
* Cilmi baarista ku saabsan astaamaha ka hortagga kansarka ee xashiishadda xashiishadda oo leh aaladda THC ee hooseysa waxaa maalgeliyey soosaarayaasha soo saaray (Kooxda dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee Australia).
cannabisCBDcaafimaadkadaawada cawskacilmi baarisTHC
Sida aad u leedahay galmo weyn intaad sarreyso
Fursadaha raaxeysiga ayaa sida caadiga ah si wanaagsan u wada socda, marka waa in aynaan la yaabin ...
Ganacsiga saamiyada cannabis
Ma ahan mid ka baxsan mabaadii'da caalamiga ah ee farsamaysan ee dhinaca dhinaca kale ee ...
Ganacsiga Insider oo soo saarey wargeyska cannabis
Xashiishadda sharciyeed waa mid ka mid ah warshadaha adduunka ugu cusub uguna dhaqdhaqaaqa badan. Laga bilaabo daqiiqada ...
Yaraynta waxyeelada iyada oo cadaadiska sii kordhaya
Faa'iidooyinka la sheegay ee mamnuucista daroogada
Waxaad ku aragtaa isha xubinta kale ee isha, laakiin isha ha ku aragtid ishaada
Dacwad oogaha guud wuxuu ka xanaaqay dukumiintiga NPO ee Cannabis
Warshadaha xashiishka ee safka kadib waa sii kobcayaan
Daraasad: isticmaalka xashiishadda xilliga uurka waxay u horseedaa isbeddel dabeecadeed carruurta
Codsiga wuxuu ku baaqayaa caymis caafimaad oo kanadiyan ah oo loogu talagalay dadka Kanada
Qaybaha & Maaliyadda
saamiyada America maalgelinta Canada Canna-Tech cannabis beerista cannabis CBD saliid cbd cocaine dembi go'aan qaadasho daroogada waxbarashada Europa maaliyad ahaan caafimaad leh caafimaadka xagasha KHLA sharci ahaan sharci-dejinta lsd mdma daawada cawska microdosing Nederland netflix cilmi baaris boqoshaada maskaxiyan dukaanka smart mukhaadaraadka synthetic THC Maraykanka Boqortooyada Ingiriiska qabatinka cunto Adduunka oo dhan sharciga tijaabinta haramaha saliida cannabis baaritaanka weed beerista cannabis xtc
Copyright DrugsInc.eu - Xuquuqda oo dhan 2020
Qeybaha & Dhaqaalaha